GNOMEApps2: Codsiyada goobada Bulshada GNOME | Laga soo bilaabo Linux
Sii wadistayada taxane ah 3 shay ku saabsan "Barnaamijyada Bulshada GNOME", maanta waxaan daabacnaa the qaybta labaad (GNOMEBarnaamijyada 2) » Isku mid ah. Si aad sidaas u yeelatid, sii wad sahaminta buug -yaraha ballaadhan ee sii kordhaya ee codsiyada bilaashka ah iyo kuwa furan ee ay soo saareen "Beesha GNOME", mareegeeda cusub Codsiyada GNOME.
Sidan oo kale, si kor loogu qaado aqoonta iyaga ku saabsan dhammaan isticmaaleyaasha guud ahaan GNU / Linux, gaar ahaan kuwa laga yaabo inaysan isticmaalin "GNOME» sida «Desktop Environment» ugu weyn ama keli ah.
GNOMEApps1: Codsiyada Muhiimka ah ee Beesha GNOME
Kuwa danaynaya sahaminta kuwii hore iyo kuwii hore daabacaadda la xidhiidha mawduuca iyo kuwa kale oo la mid ah, waxaad gujin kartaa xiriiriyeyaasha soo socda kadib markaad dhammaysato akhrinta daabacaadan:
GNOME CIRCLE: Codsiyada iyo Maktabadaha Mashruuca GNOME
Iyo si aad u hesho xog rasmi ah guji Codsiyada la sameeyay by «Beesha KDE» iyo «Beesha XFCE».
1 GNOMEApps2: Codsiyada Goobaabinta
1.1 Barnaamijyada Wareegga - Codsiyada fidiya nidaamka deegaanka ee GNOME
1.1.1 10ka hore
GNOMEApps2: Codsiyada Goobaabinta
Barnaamijyada Wareegga - Codsiyada fidiya nidaamka deegaanka ee GNOME
Aaggan ee Codsiyada goobada, ka "Beesha GNOME" ayaa si rasmi ah u horumaray Codsiyada 33 kuwaas oo aan si kooban u xusi doonno ugana faaloon doonno 10 -ka hore, waxaanan xusaynaa oo kaliya 23 -ka soo haray:
hamso. Waad ku mahadsan tahay istcimaalka isticmaaleha ee ku habboon raaxada qorista, qaab aan lahayn carqaladeyn iyo mowduucyo mugdi ah, iftiin iyo sepia ah.
Xaqiijiye: Laba Generator Code Code Authentic Factor. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay taageero waqti-ku-saleysan, hab-ku-saleysan ama hababka Steam, iyo taageerada SHA-1 / SHA-256 / SHA-512 algorithms.
buste: Adeegga softiweerka oo kuu oggolaanaya inaad dhegeysato dhawaaqyada kala duwan ee desktop -ka. Si aad u hesho dadka isticmaala si ay u hagaajiyaan diiradooda una kordhiyaan wax soo saarkooda iyagoo dhegeysanaya dhawaaqyada kala duwan.
Kaabta Pika: Codsi kuu oggolaanaya inaad si fudud u fuliso nuqullo fudud oo ku saleysan borg. Waxaa ka mid ah waxyaabo kale, waxay bixisaa: Awoodda ah in la habeeyo bakhaarrada kaydka cusub ama la isticmaalo kuwa jira oo la abuuro kaydinta maxalliga ah iyo kuwa fog.
Diiwaannada Dup ee Dup. Waxay ku saleysan tahay Déjà Dup, kaas oo kuu oggolaanaya inaad qarinto kakanaanta geedi socodka keydinta ee guuleysta.
Daacad: Waa cayaaryahan maqal oo casri ah oo waxyaabo badan ay ka mid yihiin: Soo dejinta buugaag maqal ah oo si raaxo leh loo baadho, iyo dhageysiga buugaagta maqalka ee DRM ee mp3, m4a, flac, ogg, wav iyo qaar kaloo badan.
Daaha: Adeeg softiweer oo fududeynaya in la cadaadiyo faylasha sawirka. Waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo ay bixiso: Taageero loogu talagalay cadaadis lumis iyo lumis la'aan ah, iyo ikhtiyaarka lagu keydiyo ama aan la siinin metadata sawirada.
Dejiye: Waa codsi kuu oggolaanaya inaad iskaan gasho oo aad soo saarto furayaasha QR, iyada oo loo marayo adeegsi xarrago leh laakiin fudud. Waxyaabaha kale, waxay bixisaa: Jiilka furayaasha QR, iskaanka iyadoo la adeegsanayo aalad kamarad, iyo qabashada (sawirro).
Debaaji sir ah oo sugan: Waa maamule eray sir ah oo kuu oggolaanaya inaad si ammaan ah u maamusho furaha sirta ah, si dhaqso leh oo fudud. Intaa waxaa dheer, waxay adeegsataa qaabka KeePass v.4.
Soo -dejiyaha Farta. In laga fogaado in la maro geedi socodka oo dhan ee raadinta, soo dejinta iyo rakibidda.
Barnaamijyo kale ayaa laga sameeyay arimahan Codsiyada Muhiimka ah by "Beesha GNOME" Waxay yihiin:
Soo koobid: Codsi turjumaad oo u dhexeeya luuqadaha.
Sawiridda: Codsiga sawirka mashiinka GNOME.
Jajabyo: Macmiil BitTorrent ah.
Gaphor: UML fudud iyo SysML aalad moodelinta.
Hashbrown: Codsi si loo hubiyo hashes of files.
Caafimaadka: Codsiga raadraaca caafimaadka ee desktop GNOME.
Aqoonsiga: Qalab lagu barbardhigo sawirrada iyo fiidyowyada.
Khronos: Awood u lahaanshaha diiwaangelinta waqtiga hawlaha la abuuray.
kooha: Qalabka duubista shaashadda.
Nadiifiyaha Metadata: Codsi si aad u aragto oo u nadiifiso metadata faylasha.
Suuqyada: Raad -raac loogu talagalay kaydka, lacagaha iyo cryptocurrencies.
NewsFlash: Qalab si aad ula socoto baloogyada aad jeceshahay iyo baraha wararka.
Qalab-weyne: Faafreebka macluumaadka gaarka ah.
dhagra: Codsiga sawiridda garaafyada fudud.
Podcasts: Codsiga Podcast -ka ee GNOME.
polari: Macmiilka IRC ee GNOME.
Fiiriyaha fiidiyaha: Faa'iidada si dhakhso leh loo jaro fiidiyaha.
Mowjad gaaban: Codsi lagu dhegeysto raadiyaha Internetka.
solanum: Qalab fududeeya dheelitirka u dhexeeya shaqada iyo wakhtiga nasashada.
Tangram: Qalab kuu oggolaanaya inaad ku socodsiiso codsiyada shabakadda desktop -ka.
Ilkaha: Macmiil dhakhso u ah Mastodon.
Soosaariyaha Qalabka Webfont: Adeegga kuu oggolaanaya inaad si fudud u abuurto @ xirmooyinka wejiga-font.
wike: Akhriste Wikipedia.
Marka la soo koobo, waxaan ku haminnaa tan dib -u -eegid labaad "(GnomeApps2)" ee codsiyada rasmiga ah ee hadda jira "Beesha GNOME", kaas oo wax ka qabanaya kuwa ku jira Codsiyada goobada noqo mid xiiso leh oo u adeeg si aad u shaaciso oo aad u dabaqdo qaar ka mid ah kuwan apps ku saabsan kala duwan GNU / Linux Distros. Oo sidaas daraaddeed waxaan gacan ka geysaneynaa adeegsiga iyo isugeyntan oo ah mid adag oo cajiib ah xirmada qalabka software sidee u qurux badan tahay una hawl badan tahay Bulshada Linuxera na wada bixiya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » GNOMEApps2: Codsiyada goobada Bulshada GNOME
Laga soo bilaabo Apostrophe waa in la ogaadaa in loo dhoofin karo qaabab kala duwan, sedex nooc oo bogag ah si loogu arko internetka, html cad, epub, pdf, odt, docx. Iyo inaad haysato xoogaa meeleyn ah safka hore ee calaamadeynta oo aad si fiican u qaabeysan tahay, waxaad ku daabici kartaa buug adigoon dadaal badan ku bixin qaababka la sheegay. Waan jeclahay tifaftirehan oo ay weheliyaan Typora.
Salaan, M13. Waad ku mahadsan tahay faalladaada iyo waxtarkaaga. Dhawaan waxaan u samayn doonaa maqaal shaqsi mid kasta oo ka mid ah barnaamijyada ku jira GNOME Community iyo KDE Community. Sida oo kale, waxaan hore u samaynay daabacado qaarkood wakhti ka hor, si aan mid walba ugu sii qoto dheeraano.